Waxaa laga yaabaa in haatan ogaadeen in aadan si joogta ah u isticmaali bin recycle ku saabsan desktop by. Sidoo kale, folder recycle bin la buuxin kaliya meel desktop ama aad rabto in aad desktop nadiif ah oo sidaas daraaddeed fiican waxa ay ahaan laheyd inaad ka saartid. Sababta kale ee ku talo si ay u qariyaan icon waa in aadan jeclaan icon ah. Dhibaatadu waxa ay tahay in gacanta la tirtiro doonayn inuu shaqeeyo oo aad keeni kartaa dhibaatooyin kale. Waxaad ordo halista ah ee faaruqinta bin recycle sidan samaynta kabashada ee files muhiim u adag. Halkan waxa ku jira talaabooyin fudud ay u hagaan ku saabsan sida loo qariyo aad desktop aan ka kaaftoomi kasta.
Aad screen desktop iyo xaq click. Markaas riix qaybta shakhsiyeeyo ah
Weli dhinaca desktop midig, guji walxood oo isbedel
Waxaad arki doontaa wax daaqad goobaha arbushin ilaa sidaan oo kale ah.
Riix OK doorasho si ay u qariyaan aad bin icon recycle ah
Waxaad arki doontaa bin recycle la saaro desktop.
gunteedu waa in ay ka saareen bin recycle ka desktop waa hawl fudud marka aad raacdo nidaamka horaysa. Waxa ugu wanaagsan waa in aad mar kale soo celin karaa. Haddii aadan jeclaan icon ayaa sidoo kale waxa aad ka bedeli kartaa in doorashada aad door bidayso
Sida loo tusiya Recycle Bin on Your Desktop
Intii lagu guda jiray nadaafadda ee aad desktop in la abuuro meel, waxaa laga yaabaa inaad si qalad ah laga saaro aad recycle bin. Looma baahna in argagixin; icon karo weli loo soo celiyo. Wax macno ah ma, nooca computer aad isticmaasho, waxaa jira in xal loo helo in. Halkan waxa ku jira talaabooyin fudud inuu ka soo kabsado bin recycle ku saabsan desktop dib
Tag menu bilowga iyo guji bar hawsha
A Panel Control muuqataa on xaqa aad u leedahay, guji ku yaal
Markaas guji Imaanshaha iyo Personalizatio n doorasho
Oo halkaasaannu ka, guji shaqsinimo
Markaas tagaan dhanka bidix ee suuqa, taas oo hoos yaala qaybta hawsha. Riix dooro bin recycle aad doorashada. Waxaad ka qaadan kartaa mid ka mid ah madhan ama buuxa hal-ku hore recycle bin ah tirtiray. Halkan, waxaad si fudud u dooro aad recycle bin doorbiday, ka dibna riix on celin iyo ugu dambeyntii OK.
Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa sifooyinka bin recycle ku jiraan oo aan ku xaddidnayn ay size uu idiin badbaadiyo kuwo bannaan.
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Xogta laga Recycle Bin Isticmaalka Wondershare Data Recovery
Marka aad si qalad ah u tirtirto xogta ka your computer, dukaamada bin recycle waxay ku meel gaadh ah ilaa iyo inta aad u faaruqiso. Sidaa awgeed, waxaad heli fursad uu ku soo celiyo files ama xogta si aad u goobta ay hore. Haddii aad raadinayso Software wax ku ool ah oo tayo leh la soo kabashada wanaagsan, mar dambe ma aad eegto. Wondershare Data Recovery Waa software ka soo kabashada xogta ugu wanaagsan ee la soomi xawaaraha iskaanka, taageertaa noocyada kala duwan ee files leh iskaanka qoto dheer. Software Tani waa cross waa la socon nidaamka ka hawlgala Windows Mac iyo madal. Waxaad ka iibsan kartaa ama aad version maxkamad lacag la'aan ah. Wondershare Data Recovery ayaa muuqaalada cajiib ah, oo garaaca software kale soo kabashada xogta. Wuxuu leeyahay saddex hababka soo kabashada waa kabashada cayriin, soo kabashada file lumay iyo soo kabashada xijaab. Waxaa kale oo ay leedahay qaabab kala duwan ee xogta, taas oo daboola inta badan noocyada file sida sawiro, dokumentiyo, videos, emails iyo archives on your computer ah. Tani software cabsi badan ayaa sidoo kale soo kaban karto xogta lumay ka drives flash, drives adag, kaararka xusuusta iyo drives kale saari karo, camera digital iyo taleefannada gacanta
Habka kabashada Data isticmaalaya Wondershare Data Recovery
Hoos waxaa ku qoran talaabooyin muhiim ah si ay kaaga caawiyaan in aad ka soo kabsado xogta aad badiyay isticmaalaya software Wondershare Data Recovery.
Tallaabada 1 Dooro nooca file dib u soo kabashada
Marka hore, waxaa looga baahan yahay in aad doorato nooca file oo aad doonaysid in aad dib u hesho videos, Cajalado, sawiro iyo email ah. Waxaad sidoo kale laga yaabaa recoving dhammaan faylasha lumay haddii ay muhiim kuu yihiin. Just kor u fikira waxa aad rabto in aad software inuu ka soo kabsado ka hor inta Socota tallaabada xigta.
Tallaabada 2 Dooro soo kabsado recycle bin
Si ay u soo kabtaan aad files lumay ka Recycle Bin, dooran bin recycle in ay awood u qalab kabashada leeg dhammaan faylasha ee Recycle Bin.
Tallaabada 3 kabsaday tirtiray files ka recycle bin
Ka dib markii software dhameystiray iskaanka dhex Recycle Bin, aad haatan ku eegaan karo natiijada scan. The files soo kabsaday ayaa la dhigay in qaybaha kala duwan si ay awood xasilloonaan ku travel. Dhex mara dhammaan faylasha aad rabto in aad iyaga ka soo kabsaday, u fiirsada kuwa ka dibna riix kabsado. Muddo ka dib waxaad heli doontaa dhammaan faylasha lumay aad doonayso inaad iyaga la raadsan.
Haddii aadan heli xogta aad u jeclaystay, fuliyaan baaritaan qoto dheer. Wondershare Data Recovery Waa bogsoodaan sida ugu fiican xogta waan ogahay. Waxaa maanta sii kubad haddii aad u baahan tahay in ay dib u soo ceshano files muhiim ah. Ma waa u qalantaa in ay sii daran aad files lumay ogolaan software ah in ay xal.
Kabsado Khasaaray Xogta Mac OS X El Capitan
macruufka 9 ee Recovery Mode: Sida loo bax Recovery Mode
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga SD Card kharribeen
Flash Card Data Recovery: 3 Talaabada inuu ka soo kabsado Xogta laga Flash Card
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Excel Xaashida Macluumaadka
Sida loo Soo Celinta ah Barzakh, Lost
> Resource > Ladnaansho > Sida loo qari Recycle Bin Icon ka Your Desktop